Alaab -qeybiyeyaasha iyo Warshadda - Soo -saareyaasha Saxanka Shiinaha
Saxanka Strata waa saxan taageero culeys khafiif ah oo leh aag weyn oo dusha sare ah, kaas oo sida caadiga ah loo isticmaalo saxan dhexe si loo kordhiyo daboolka dusha sare ee suunka. Waxaa sidoo kale si weyn loogu adeegsadaa arjiga taageerada dhulka.
Saxanka mesh ayaa si gaar ah loogu talagalay hagaajinta mesh, kaas oo si wada jir ah loogu isticmaalay boolal qayb ka ah nidaamka taageerada dhulka si loo taageero dhagaxyada. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa Macdanta, Tunnel -ka iyo Jiirada, iwm oo inta badan qayb ka ah codsiyada taageerada dhulka.
Flat Flat waa saxan fudud oo si wada jir ah loo isticmaalo oo la wada isticmaalo bolt resin, bolt cable, threadbar bolt, boodhka wareega iyo dhalada galaaska iwm si loogu bixiyo nidaam taageero dhagaxa ku jira arjiga taageerada dhulka, kaas oo si weyn loogu isticmaalo macdanta, tunnel iyo jiirada mashaariicda.